Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 504666 times)
« Reply #700 on: September 22, 2011, 01:56:44 AM »
တောစပ်တစ်နေရာတွင် ကိုဖြူ၊ ကို ကြူ နှင့် ကိုအူ တို့သုံးဦးအား ရာဇဝတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ပေးရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ အစောင့်ဖြစ်သူက ကိုဖြူအား အချုပ်ကားတွင်းမှ ပထမဆုံး ခေါ်ထုတ်လာသည်။ ထို့ နောက် အရာရှိဖြစ်သူက သေနတ်သမားအား ပစ်မိန့်ပေးသည်။(အင်္ဂလိပ်လို အမိန့်ပေးသည်)
ကိုဖြူ-(အရာရှိ ဧ။် စကားမဆုံးခင် ရုတ်တရတ်ထအော်သည်) ,’ Earthquake!’
အရာရှိ– ‘Ready’, ‘Aim’
ကိုကြူ–(အရာရှိ ဧ။် စကားမဆုံးခင်) ‘Tornado!’
အရာရှိ-’ Ready’, ‘Aim’
ကိုအူလည်း ကျန်လူများကို အတုယူ၍(အရာရှိ ဧ။် စကားမဆုံးခင် ) အော်လိုက် ပုံ က “Fire!”
(မှတ်ချက်။ ။ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ …Fire ဆိုတာ ပစ်လို့ အမိန့်ပေးတာပါ၊ စကားလုံးတွေကို သူ့နေရာနှင့် သူသုံးနိုင်ကြပါစေ)
« Reply #701 on: September 22, 2011, 01:58:12 AM »
ဆိုင်ရှင်။ ။ ရပါတယ်။ ဒီကြက်တူရွေးက ဒေါ်လာ ၅၀၀၊ ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်တယ်။
ဆိုင်ရှင်။ ။ ဒီကြက်တူရွေးက ရုပ်မြင်သံကြား ဖွင့်တတ်၊ ပိတ်တတ်ပြီးသီချင်းလည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀။
၀ယ်သူ။ ။ ဈေးကြီးလိုက်တာ …။ သူကကောဘာတတ်ပါသလဲ…..။
ဆိုင်ရှင်။ ။ မနက်တိုင်း ဟိုကြက်တူရွေးနှစ်ကောင်က သူ့ကို ဆရာကြီးလို့ခေါ်နေလို့ပါ။
« Reply #702 on: September 24, 2011, 08:00:44 AM »
သမက်နဲ. ယောက်ခမ ဇတ်လမ်း
"ဟေ့ကောင် မင်းဘာအချိုး ချိုးတာလဲ ငါ.သမီးကိုခိုးသွားတာမနေ.ထဲက ခုလာပို.တာမနက် ၇နာရီ"
« Reply #703 on: September 25, 2011, 11:40:44 PM »
အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်တခုမှာဆရာမကအရပ်လေးမျက်နှာကိုခလေးများအားသင်ပေးနေသည်၊ ဆရာမသည်သူမနှင့်အတူ East , West , North , South ကိုလိုက်ဆိုခိုင်းသည်။ ခလေးတယေါက်သည် South ဆိုသောနေရာရောက်လျင်သူတန့်၍မဆိုတော့ပါ၊ ဆရာမကအတန်တန်ဆိုခိုင်းသော်လည်း၎င်းခလေးသည်လိုက်မဆိုပါ၊
ဆရာမကအဘယ်ကြောင့်လိုက်၍မဆိုသနည်းဟုမေးသောအခါ၊ ကျောင်းသားခလေးက “ အမေမှာထားတယ် South ဆိုတာညစ်ပတ်တယ်၊ မပြောရဘူး” ။
ထိုအချိန်ဆရာမက “ အမလေးသားသားရယ်၊ သားသားအမေရဲ့South ကသာညစ်ပတ်တာ၊ ဆရာမရဲ့South ကသန့်ရှင်းတယ်၊ အရေးမကြီးဘူးလိုက်ဆို၊ လိုက်ဆို”....။
« Reply #704 on: September 25, 2011, 11:43:42 PM »
တရက်၌ အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ခ်ျဘုရ်ှသ ည်ခေါင်းကိုက်၍၊ ဆရာဝန်ထံသွားပြသည်၊ ဆရာဝန်မလေးက သူ့၏ဦးခေါင်းကို brain scan လုပ်ပေးလိုက်သည်၊ နောက်နေ့ဂျော့ခ်ျဘုရှ် သူ၏ result ကိုသွားကြည့်သောအခါ၊
ဆရာဝန်မလေးက “သမ္မတကြီးကိုစိတ်မချမ်သာစရာတခုကိုပြောရဦးမယ်၊ သမ္မတကြီးရှင့်လူသားများ၏ဦးနှောက်သည်နှစ်ခြမ်းရှိပြီးဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်ညာဘက်ခြမ်းဟူ၍ရှိသည်……”
ထိုအခါဘုရ်ှကစိတ်မရှည်စွာဖြင့်ကြာဖြတ်ပြိး “ ဒါကတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ကွာ၊ လိုရင်းကိုတာပြောဆန်းပါ ”
ဆရာဝန်မလေးကဆက်၍ “ That’s true, Mr. President. But your brain is very unusual because on the right side there is nothing left , while on the left side there is nothing right.” (သမ္မတကြီ၏ညာဘက်ဦးနှောက်သည်ဘာမှမကျန်တော့ဘူး၊ ဘယ်ဘက်ဦးနှောက်သည်ဘာမှမကောင်းတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်ညာဘက် ဦးနှောက်သည်ကောင်းတာဘာမှမကျန်တော့ဘူး၊ ကျန်တဲ့ဟာလည်းဘာမှမကောင်းတော့ဘူး)
ဆရာဝန်မလေးကဆက်ပြီး “ ဒါမျိုးရောဂါ ကျမတို့ဗမာပြည်က လူကြီးတွေဖြစ်နေတာကြာလှပြီ၊ သမ္မတကြီးက ခုတလောမှဖြစ်တာ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ အားလည်းမငယ်ပါနဲ့လူနာဖော်အများကြီးရှိပါတယ်”ဟူသတည်း။
« Reply #705 on: September 27, 2011, 03:20:30 AM »
ကိုလှသည် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ထမင်းသွားစားသည်။ အတော်ကြာအောင် အော်ဟစ်မှ စားပွဲထိုးလေးတစ်ယောက် သူ့အနားရောက်လာ၏။ ထိုစားပွဲထိုးကလေးသည် ကိုလှ အားရိုင်းရိုင်းပျပျပင် အော်ဟစ်ဆက်ဆံ၏။ ကိုလှသည် သည်းမခံနိုင်တော့၊ ဒေါ်သထွက်လာ၏။ မန်နေဂျာကို တိုင်၏။
မန်နေဂျာက စားပွဲထိုးကလေးကိုခေါ်ပြီး ပြစ်တင်ကြီမ်းမောင်းလေ၏။
“ဟေ့၊ ဟောဒီလူကြီးမင်းက ခွေးလို အကျယ်ကြီးဟောင်ပြီး မင်းကိုခေါ်နေတာတောက် မင်းက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုကွ၊ အေး. . .မင်း ဒီပုံအတိုင်းဆက်သွား၊ ဘယ်ခွေးမှ ဒီဆိုင်မှာ လာစားမှာမဟုတ်ဘူး။” ဟူ၏။
« Reply #706 on: September 27, 2011, 03:21:12 AM »
‘တစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင် နှစ်ရမယ်။ နှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းရင် လေးရတယ်။လေးနဲ့လေးပေါင်းရင် အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲ ပြောစမ်း။’
‘ဒါတော့ ဆရာ မတရားဘူး။ လွယ်တာကျတော့ ဆရာက ဖြေတယ်။ ခက်တာကျတော့ ကျွန်တော့်ကို လာမေးတယ်။’
« Reply #707 on: September 27, 2011, 03:22:37 AM »
‘မင်းက ငါ့ကို အရူးလုပ်နေတာလား’
‘ဟင့်အင်း၊ ခင်ဗျားရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝအပေါ်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ အနှောက်အယှက်မပေးတတ်ပါဘူး’
« Reply #708 on: September 27, 2011, 03:24:16 AM »
တရားသူကြီးသည် တရားခံသို့ ကြိမ်လုံးဖြင့် ညွှန်ကာပြောလိုက်သည်။
‘ဟောဒီ ကြိမ်လုံးဟာ ဒုစရိုက်သမားကို ညွှန်ပြနေတယ်’
‘ကြိမ်လုံးရဲ့ ဟိုဖက်ထိပ်လား ဒီဖက်ထိပ်လား ခင်ဗျာ’
« Reply #709 on: September 27, 2011, 03:26:28 AM »
‘မင်းဟာ တစ်ပတ်အတွင်း ရှစ်ကြီမ်တောင် ဖောက်ထွင်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပါလား’
‘ဟုတ်ပါတယ် တရားသူကြီးမင်း။ နေ့မအား ညမနား အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ လူတိုင်း ကျွန်တော့်လိုသာ အလုပ်လုပ်ကြရင် အားလုံးကြွယ်ဝကြမှာ မလွဲပါဘူး’